Arcade frantic 5 ho an'ity andro Noely ity | Androidsis
Lalao video arcade 5 mampiankin-doha sy feno hatezerana amin'ity andro Noely ity
Raha nandinika ny lalao video dimy tsara indrindra avy amin'ny studio lalao video roa mahomby izahay, toa ny Noodlecake Studios sy Nitrome, dia tsy afaka nanadino arcade maromaro izay nahatonga mpilalao marobe nandalo azy ireo tamin'ity taona ity izay efa hifarana. Arcades manome ny naoty amin'ny lalao hazakaza-tsoavaly na amin'ny fomba faniriana handositra ny andiana zombie marobe na ny ho lasa karazana Rambo.
Etsy ambany no hahitanao a andiana lalao video voafantina tsara Ka tsy misy ny fahafinaretana amin'ny fahafinaretana ary manatevin-daharana an'ireo dimy avy amin'ny studio lalao video roa. Eto ianao dia hahita cocktail tsara miaraka amin'ny karazan-tsakafo rehetra hankafizinao toy ny dwarfs ary hanandrana ny tsirairay amin'izy ireo amin'ny fomba tsara indrindra, izany dia amin'ny alàlan'ny fametrahana azy ireo ao amin'ny terminal Android anao hijerena izay fitaovana anaovana azy. A 2015 izay efa hialantsika ary hanokatra ny làlana mankany amin'ny 2016, taona iray izay hisy lalao video manan-danja tokoa amin'ny toe-pahasalaman'ity OS ity ho an'ny finday.
1 Devoly mpihinana
2 Zazalahy bala
3 Chase Horizon
4 Ramboat: Maherifo mitifitra
5 Tsy maintsy manafaka
Tsy ny segondra fitsaharanao no hanana eo alohan'ilay ratsy amin'ny ity karazana mpihaza ity ny vampira na mpamosavy izay andraisan'ny sary anjara andraikitra lehibe, indrindra ireo vokany sary izay mametraka antsika alohan'ny karazana fitaovam-piadiana sy hery rehetra.
Miandry anao ry zareo tanàna dimy ao no ahitanao ireo karazana andalana matoatoa, na dia eny miaraka amin'ny fitaovam-piadiana tsara indrindra aza mba hahafahana manary ny tsirairay amin'ireo fahavalo ireo izay mivoaka ny fasana. Saripika mahasarika maso sasany izay mahatonga azy io ho iray amin'ireo arcade frenetic indrindra amin'izao fotoana izao, farafaharatsiny rehefa mahafantatra ny fomba hisafidianana ny fotoana mety hitifirana na hiarovanao tena.
Devil Eater: Counter Attack hiambina ny fanahinao
Miaraka amin'ny fitsangatsanganana sary mahatalanjona, azo antoka fa izany Zazalahy bala ho iray amin'ireo milamina amin'ity andiany ity, fa tsy midika akory izany fa tsy mila maika haingana ianao handroahana ny tenanao amin'ny tafondro manaraka vao hitifitra amin'ny manaraka.
Lalao izay mandany kalitao amin'ny lafiny rehetra ary izy io dia iray amin'ireo fanampiana tsara indrindra ho an'ny Android tato anatin'ny volana vitsivitsy. Miaraka amin'ny ambaratonga marobe miaraka amin'ny Bullet Boy dia hanana lalao mandritra ny fotoana fohy ianao satria ny mpikarakara azy no nikarakara azy io mba tsy ho tara amin'ny fahafinaretana mandritra ny ora maro ianao.
Developer: Lalao Pomelo
Ity dia iray amin'ireo lalao ankafiziko indrindra amin'ny taona ary satria aho tadidio ny fihazakazahana izay nahazoanay an'io blondy io sy i Ferrari mandeha amin'ny arabe miaraka amina firindrana tsara. amin'ny Chase Horizon azonao atao ny mahatadidy ny ampahany amin'io avy amin'ny efijery finday avo lenta.
Miaraka amin'ity lalao video ity isika dia mahatsapa fa tsy ny zava-drehetra no manakaiky ny hyperrealism amin'ny sary amin'ny lalao iray, fa amin'ny fomba fahitana tena manokana dia afaka mamita ny vokany mitovy amin'izany ianao. Arcade tsara ahafahanao mitondra fiara isan-karazany amin'ireo lalana saika tsy misy farany ireo.
Ramboat: Maherifo mitifitra
Tonga ny fahavaratra ity lalao video arcade ity izay azontsika atao fantaro akaiky hoe manao ahoana ny hoe saika Rambo. Izy io dia manana repertoire tsara fitaovam-piadiana mba hahafahantsika mamono ny fahavalo tsirairay izay ho tonga amintsika.
Arcade afaka mampatsiahy anao ireo an'ny milina arcade toy ny Contra angano, na dia eto aza ianao dia milalao miaraka amina olona tsy miraharaha kokoa, na dia eny aza, amin'ny haavo teknika avo lenta. Filokana lehibe iray hafa satria mamono ho an'ny Android amin'ny safidy hendry isaky ny singa teknika mandrafitra azy.
Ramboat - Lalao Offline Action
Tsy maintsy manafaka
tokoa ny lalao tsotra indrindra ananantsika ato amin'ity lisitra ity, fa ny iray izay hampifandray anao indrindra, satria tsy maintsy hiala amin'ny tongotra ianao rehefa miseho ny zombies tsirairay izay hivoaka ho anao. Lalao video mahafinaritra sy mampiankin-doha miaraka amin'ny hafanam-po be izay manaraka io fironana amin'ny lalao zombie izay hitantsika be dia be manodidina ny Play Store.
Lalao video miaraka amin'i zavakanto Retro pixelated izay mirehareha karazana litera isan-karazany izay tsy maintsy mamoha antsika amin'ny fotoana mitovy amin'ireo scenario vaovao sy ny toetr'andro. Ka ahoana no nitadiavanao fikorontanana sy fahafinaretana Tsy maintsy manafaka dia ho anao.
Developer: kilalao cherrypick
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Lalao video arcade 5 mampiankin-doha sy feno hatezerana amin'ity andro Noely ity
Manadihady izahay Marcos Viladomiu, talen'ny marketing an'ny Ultimate Ears
Lalao video 5 Nitrome izay tsy azonao adino amin'ity Krismasy ity